Lixdaan Arrimood Ka Feker Kahor Intaadan Guursan Xaas Labaad | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»Lixdaan Arrimood Ka Feker Kahor Intaadan Guursan Xaas Labaad
Aayaha editor Send an email December 23, 2018
Cilmi baaris dhawaan la sameeyay ayaa dhiiri galisay in ragga lacagta heysto inay guursadaan xaasas badan, inkastoo qaar kamid ah ragga ay u dhaqmaan qaab ciyaal suuqnimo ah.
Hoos ka aqriso dhowr waxyaabood oo loo baahanyahay inaad ka fakartid kahor inta aadan guursan xaasas badan.
Marka ugu horeysa ma tahay nin awooda laba xaas? Awood ma u leedahay inaad taageerto labada xaas ama aad ka baxdid xaqooda iyo xaqqa caruurta ay kuu dhalaan ?
2. Ka feker dareenka xaaskaaga
Guursashada xaas labaad oo aadan kala hadlin xaaskaaga 1-aad waxay la micno tahay shaqaleysiinta ama qorashada shaqaale cusub oo uusan ogeyn madaxa shaqada iyo shaqaalaha iyo maamulahaaga, waa inay kaa ogolataa ama ay kugu raacdaa arrintaas haddii aysan kugu raacin ama kuu tanaasulin waxaa ka dhalan kara halis.
3. Noqo mid diyaarsan ama isku dubaridan
Haddii ay xaaskaaga kaa ogolaato qorshahaas waa inaad keentaa qaab loo wada noolaado, Miyey meelo kala duwan ku noolaanayaan ? haddii ay haa tahay waa inaad ku filnaataa waxyaabaha ay u baahanyihiin xaasaskaaga maxaa yeelay qofka kaliya ee ay heystaan waa adiga sidoo kale xaaskaaga labaad waa inaad mudnaan siisaa iyadana.
Haku ciyaarin, la soco xaaladdooda una noqo qof u furfuran oo la xiriira.
Lahaanshaha xaas labaad ma ahan inaad iska ag seexatid, waa inaad daacad u noqotaa xaasaskaaga, waa inay jirtaa qadarin isla markaana ay ogaadaan halka aad joogtid haddii ay noqon lahayd inaad la joogtid xaaska kale.
Xaqiiji in xaaskaaga iyo caruurtaada aad ilaalisid isla markaana aad la socotid waxa ay ku suganyihiin, waana in mid kamid ah xaasaskaaga aysan dareemin in mida kale looga eexday si dhex dhexaad ah ugu cadaalad fal.
Faa'idooyinka Caafimaad ee Filfisha & Cudurro waaweyn oo daawo ay u tahay
UGAAR AH RAGGA: 6 Tilmaamood Oo Lagu Garto Haweeneyda Ku Garab Taagan
UGAAR AH DUMARKA: 6 Sifo oo lagu garto Ninka marka uu beenta kuu sheegaayo